Added: 2012 October 05
यौनमा मात्तिएको मान्छेले के गर्दैन ? सव थाक गर्छ । फरक यती मात्र हो । कसैले वन्द कोठा भित्र गर्छ त कसैले लाजै पचाएर खुला सडकमै । जे होस उत्तेजनामा आउदैमा होस गुमाउनु चांहि राम्रो पक्कै होइन । अमेरिकामा हालै एक व्यक्तिले सडकमै अप्राकिृत सेक्स गर्दा प्रहरी खोरमा पुग्नु परेको छ । अमेरिकाको विस्कन्सिनमा सडकमै सोफामा अप्रकृतीक सेक्स गरिरहेको अवस्थामा एक जना पुरुष पक्राउ परेका छन् ।
सडकमै सोफा राखेर दुइ सोफाको चेँपमा सम्भोगको मजा लिइरहेका ४६ वर्षे गेरार्ड स्ट्रेटर नामक पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । फ्याँकिएको सोफालाई स्ट्रेटरले यौनको प्यास मेट्न प्रयोग गर्दै रतिक्रिडा गरिरहेका अवस्थामा रातिको ११ बजे देखेको थियो ।
स्ट्रेटरको यस्तो कृयाकलाप गरिरहेको देखेको पुलिसले सोफामा को हो ? भनेर चिच्याउँदा हत्तपत्त सुरुवाल सारेर नजिकैको अपार्टमेन्टभित्र छिरे पनि पुलिसले खोजतलास गरेर उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनलाई सार्वजनिक स्थानमा अनैतिक क्रियाकलापको मुद्धा चलाइएको छ । उनलाई ९ महिना सम्मको जेल र ११ हजार डलरसम्म जरिवाना हुनसक्ने बताइएको छ । स्मरण रहोस् इटालीमा पनि फोहोरमा फालिएको बोतलसँग सेक्स गरेर फरार एक पुरुषलाई प्रहरीले खोजीको सूचिमा राखेको छ । यस अघी पनि एक ब्यक्तिले सडकमै खेलौना भालुसंग यौन क्रिडा गरिरहेका बेला पक्राउ गरेको थियो । तर ती ब्यक्ति मानसिक रुपमा विछिप्त रहेका बताइएको थियो ।